नेपाल – Stories of Sandeept
On January 9, 2018 By sandeept252In नेपाली, Nepal, Nepali, Nepali Poem, Poetry, Public InterestLeaveacomment
न्याय नपाई कोही रोइरहँदा
न्यायालयको मान रह्यो सायद !
अपराधीहरू खुल्लमखुल्ला हिँडिरहँदा
न्यायालयको मान बढ्यो सायद !
न्यायकै किनबेच चलिरहँदा
न्यायालयको इज्जतले आकाश छोयो सायद !
न्याय पाउँ भन्नेहरू
न्यायालायमै रोइरहेछ्न् !
अपराधी समाऊ भन्नेहरू
डरले काँपिरहेछ्न् !
न्यायको किनबेच नगर भन्नेहरू
कठघरामा उभ्याइरहेछ्न् !
On November 9, 2017 November 9, 2017 By sandeept252In नेपाली, Blogging, Humanity, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Politics, Public Interest5 Comments
On January 15, 2017 January 15, 2017 By sandeept252In Blogging, Humans and Humanity, Nepal, NepaliLeaveacomment
माननीय सांसदज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् मन्त्रीज्यूहरू,
आज राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा यो पत्र लेख्दै छु । मलाई लाग्दैन देशका सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई सानातिना कुराहरू सम्झाइरहनु पर्दैन तर मन मान्दैन । २०७२ वैशाखको भुकम्प पीडितका सम्बन्धमा केही कुरा गरौं भन्ने लागिरहेछ ।
हामी (यहाँहरू समेत) सबैले कुनै न कुनै रूपमा वैशाख १२, २०७२ को भुकम्पले ल्याएका समस्या भोगेकै हौँ । दुर्गममा भने मानिसहरूले अझ धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । उनीहरूले बाँस गुमाए, आफन्त गुमाए तर आश मारेनन् । हामीलाई लागेको थियो हाम्रो अभिभावक कहीँ छ, गरीब नै भए पनि हाम्रा दु:ख कम गर्न सक्ने अभिभावक ।
तर हाम्रा अभिभावक हाम्रा पीडा महसुस नै नगर्दा रहेछन् । कसरी सक्नुहोला जब यहाँहरू वातानुकुलित घर, कार्यालयमा बस्नुहुन्छ र त्यस्तै सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुहुन्छ । हामीले हरक्षण महसुस गर्ने चिसो यहाँहरू महसुस नै गर्नुहुन्न । हाम्रा पीडा बुझ्नै सक्नुहुन्न ।
सक्षम, असक्षम; धनी गरीब जे भए पनि हामी यहाँहरूमाथी नै भर पर्नु परेको छ राजनीतिक दाउपेच र भ्रष्टाचारका कारण । केही भुकम्प पीडितसँग पैसा छ, घर बनाउन सक्छन्, बनाइरहेका पनि छ्न् । कतिले पैसा भएर पनि बनाउन सकेका छैनन् । यहाँहरूले नै भन्नुभएको थियो- “भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भविष्यको सुरक्षाको लागि ।” उनीहरूले माने । उनीहरूले प्राविधिकको आश गरे । कम्तिमा प्राविधिक तालिमको आश गरे । तर यहाँहरूले निराश बनाउनु भयो ।
अधिकांश पीडितसँग खान एक गाँस छैन । आर्थिक सहयोगविना घर बनाउन सम्भव छैन । एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउनु भयो, प्रमुख आयुक्त कसलाई राख्ने भनेर विवाद गरिरहनुहुन्छ । यहाँहरूले भुकम्प पीडितका नाममा फोहोरी राजनीति गरिरहँदा उनीहरू चिसोले काँपिरहेका छन्, निस्सासिइरहेका छन् । यहाँहरूले नियमावली बनाइरहँदा बालक र वृद्धहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
गिरानचौरको धुर्मुस-सुन्तली एकीकृत वस्ति । स्रोत: nepalaaja.com
यहाँहरूले राजधानी नजिकका पीडितलाई त केही गर्नुभएको छैन, दुर्गममा केही गर्नुहोला भन्ने त आश छैन । तर वचन दिनुभएको छ र त्यस्को लाज राख्नुहुन्छ भन्ने कामना गर्दछु किनभने जसले वचनको लाज राख्दैन त्यो त मान्छे नै होइन । तर केही सहयोगी मनहरूले वचन नदिएर पनि धेरै गरेका छन् । धुर्मुस-सुन्तलीले गरेका कार्यले यहाँहरू लज्जित हुनुपर्ने हो । उनीहरूको कदमले केही पीडितलाई आशाको किरण देखाएको छ, समुदाय दिएको छ अनि भविष्यको मार्ग पनि दिएको छ । धुर्मुस-सुन्तलीले गरेको कामको एक प्रतिशत मात्र पनि यहाँहरूमध्ये हरेकले गर्नुभएको भए, पीडितको जीवन कम्तिमा पाँच सय प्रतिशत राम्रो भैसक्ने थियो ।
भुकम्प पीडितले धेरै समस्या भोगिरहेका छन् । यहाँहरू शक्ति सन्तुलनमा व्यस्त हुनुहुन्छ तर केही समय निकालेर मनदेखि उनीहरूका घाउहरूमा मलम लगाउनुहोस्, आशीर्वाद लाग्नेछ । किनकि जनताको आशिर्वादविना यहाँहरू सत्ताको खेल खेल्नै सक्नुहुन्न ।
अंकित ढकाल “सन्दीप्त”